AMBOHIDRATRIMO : Manana tombony amin’ireo tetikasa tanterahin’ny Filoham-pirenena
Manana tombony amin’ireo tetikasa tanterahin’ny Filoham-pirenena ny Distrikan’ Ambohidratrimo, hoy ny Depiote Jhonny Rakotoarisoa, voafidy teny an-toerana. 9 janvier 2020
Nambarany fa tao anatin’ny herin-taona latsaka dia efa hita soritra mivaingana sahady ny tetikasan’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina raha tsy hilaza afa-tsy ny fananganana kianja manara-penitra, fananganana « Building Mora » manerana ny faritra maro ary koa ny fananganana ireo fotodrafitrasa hafa miantraika mivantana amin’ny fiainam-bahoaka.
« Mbola manana efa-taona be izao ny Filoham-pirenena hananterahana ireo velirano nampanantenainy ny vahoaka malagasy, mino izahay fa ho vitany tsara io satria ary hahavita lavitra mihoatra noho izany aza izy. Tsy mihambo izahay ao Ambohidratrimo fa manana tombony mihitsy amin’ny fisitrahana ireo fotodrafitrasa aoriny raha tsy ilaza afa-tsy ny fananganana ny Tana-Masoandro sy ny « Trano mora » maro izay efa manomboka amin’izao fotoana izao », hoy ny nambarany.
Nambarany koa nefa fa mety hisy foana ny olana amin’ny fanataterahana ny velirano saingy tsy tokony hatao ho sakana izany. « Ilaina foana ny fifanatonana sy ny fifampiresahana satria tsy misy tsy vitan’ny resaka. Efa misy ny ezaka ataon’ny tompon’andraikitra amin’ny sehatr’asa rehetra ka tokony hifanampy isika Malagasy satria izany no tena ilaina eto », hoy hatrany ny fanazavany.